Zero-simba smart & quot; pedyo-yakakodzera mhepo inonamira & quot;, kudziya munguva yechando uye inotonhorera muzhizha zvipfeko hakuchizve kurota - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
Kupisa kwemuviri wemunhu kunoendeswa kubva kune wega wekupinda mukati meganda, uyezve inotsinhaniswa nenzvimbo dzakapoteredza kuburikidza nezvipfeko, kuitira kuti ichengetedze yakasimba yekudziya yemagetsi mumuviri wemunhu. saka, yakave nzira inozivikanwa kwazvo yekuzadzisa inopisa kunyaradza manejimendi yemuviri wemunhu kuburikidza nemafuta ekushongedza zvipfeko, uye jira rekuwedzera rinobuda sezvavanoda The Times. zvisinei, mazhinji emachira-anodzora kupisa anotarisirwa kusvika pari zvino anezvakadai sengeremo yakakura, kurema, varombo kupfeka kurwisa, mutengo wakakwira, uye kutadza kuburitsa muhuwandu hukuru. Uyezve, kungopedza kufambisa uye kutonhodza mabasa hakugone kuwanikwa nyore panguva imwe chete
Chikwata chevaongorori paHuazhong University of Science uye Technology muChina chakagadzira chihuremu, mvura, nyorovera, yakagadzika uye inopenya mavara anehungwaru jira iro rinogona kuchengetedza ganda rinodziya uye rinotonhorera ne zero simba kushandisa.
Vanotsvaga vane ganda repedyo re silika protein sezvinhu zvakasviba, uchishandisa nzira yechando inoputira nesainzi kuronga uye kugadzirisa mamiriro e-micro-nano yemafirita, yakanga yakagadziriswa nehupamhi hwemukati porility uye yakaderera coefficient yeakakwirisa mafuta ekuitisa micostructure fiber, kuburikidza nekuwedzera kubatanidzwa mu fiber microstform tembiricha yekushisa shanduko yezvinhu uye inonamira PDMS yekubika, inopa fiber yakasimba abrasion kuramba, mvura, yakapfava zero simba rekushandisa maitiro ehungwaru kupisa kudzora.
Pamusoro pe, zvakanakisa zvivakwa pakuchengeta fiber yepakutanga, pahwaro hwechikwata chekutsvagisa chakashandisa chekare mvura yekudhira tekinoroji ine micridhi fiber yakagadzirirwa, uyezve kuburikidza neacostform fiber fiber yekuruka maitiro, machira mukati - 20 ~ 90 ℃ ine yakanaka-nzira mbiri kupisa kupisa kuita, uye kupisa kwayo kupisa kuita sekuwanda kwenhamba yemachira inowedzera.
Iyo PCM yakabatanidzwa mu microstform fiber haigone kungoita zvakanyanya kuderedza kusimuka kwekushisa kwekutenderedza, asi zvakare inogona kudzokororwa kazhinji. Kuedza kugona kwemachira kudzora tembiricha yeganda, ivo vakatsvaga vakaisimbisa mune polyester magurovhosi. Kana ruoko rwakacheneswa rwakaiswa munzvimbo yemakumi mashanu ℃, PEG inobata kupisa kubva kunharaunda, kutonhora ganda rakaputirwa pasi pemucheka. Kana ruoko ruchisimudzirwa kunzvimbo inotonhora ye10 ℃, PEG inosimbisa uye inoburitsa kupisa, kuita kuti ganda ridziyirwe. Mune imwe yekuedza test yeanopisa nharaunda uye inotonhora nharaunda, iyo yekuchenjera inopisa-inodzora machira yakaona "manejimendi akangwara" yekudziya kwemuviri wemunhu nekushandisa yakasarudzika yezvimiro uye chikamu chinogadzirisa zvinhu zvinosanganisirwa pasina magetsi ekunze.
Iyo yakangwara tembiricha-inodzora jira rakagadzirirwa nechikwata rinogona kusangana nezvinodiwa zvekunyaradza kwevanhu mafuta uye kuderedza mashandisiro esimba panguva imwe chete, kuisa hwaro hwekushandisa inoshanda yefaira machira maringe neako pachako ekupisa kwemafuta, iyo inoratidza danho rakakosha pamberi mukuvandudzwa kwehupfumi uye zvakatipoteredza zvinogoneka tekinoroji nesimba-rekuchengetedza jira indasitiri.